Hlola i-Thailand - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eThailand.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eThailand
Bukela ividiyo ekhuluma ngeThailand
Hlola Thailand ngokusemthethweni uMbuso waseThailand izwe eliseNingizimu mpumalanga ye-Asia.
Ngokudla okuhle okumangazayo, isimo sezulu esishisayo, isiko elihehayo, izintaba ezinhle namabhishi amakhulu, iThailand iyigagasi labahambi emhlabeni wonke, futhi kunjalo impela.
I-Thailand iyizwe eliseNingizimu-mpumalanga ye-Asia evakashelwa kakhulu yizivakashi, futhi ngesizathu esihle. Ungathola noma yini lapha: ihlathi eliminyene njengoba liluhlaza ngangokunokwenzeka, amanzi aluhlaza okwesibhakabhaka azizwa efana nokugeza okufudumele kunokubhukuda olwandle, nokudla okunganciphisa izinwele zakho zekhala ngenkathi udansa ngaphesheya kokunambitha kwakho. Okuxakile, kepha kuphephile; kushibhile, kepha kufakwe yonke into yesimanje oyidingayo, kukhona okuthile kuyo yonke inzalo nawo wonke amabakaki entengo, ukusuka kubungweli be-backpacker bungalows kwamanye amahhotela amahle okunethezeka emhlabeni. Futhi ngaphandle kokujikeleza okunzima kwezokuvakasha, iThailand iqhubeka nokuphila kwayo okungapheli kweThai, ngesiko nomlando konke okungokwayo kanye nabantu abanganethezekile ababedume ngokumamatheka kwabo nendlela yabo yokuphila ejabulisa uSanuk. Abahambi abaningi beza eThailand futhi bandise ukuhlala kwabo ngokungaphezulu kwezinhlelo zabo zangempela futhi abanye abaze basithole isizathu sokuhamba. Noma ngabe yini inkomishi yakho yetiye, bayayazi indlela yokwenza ngayo eThailand.
Bangkok - Inhlokodolobha yaseThailand eyayiphithizela, inhlokodolobha eyaziwa ngokuthi amaThailand njengeKrung Thep
I-Ayutthaya - idolobha elingumlando, i-UNESCO World Heritage Site nedolobha elidala laseSiam
IChiang Mai - inhloko-dolobha yaseNyakatho Thailand nenhliziyo yesiko likaLanna
IChiang Rai - isango eliya eGolden Triangle, ubuhlanga obuncane nokuhamba kwentaba
IChumphon - isango eliya eChumphon Archipelago, amabhishi angenasisekelo kaPathio nesiqhingi saseKo Tao
IKanchanaburi - ikhaya lebhuloho elingaphezu koMfula Kwai kanye neminyuziyamu eminingi yempi yomhlaba wonke
I-Nakhon Ratchasima - idolobha elikhulu kunawo wonke esifundeni i-Isaan
I-Pattaya - enye yezindawo ezihamba phambili zabavakashi, eyaziwa ngokuphila kwayo ebusuku
ISukhothai - inhloko-dolobha yokuqala yaseThailand, enamabhodlo amangalisayo namanje
I-Surat Thani - ikhaya loMbuso WaseSrivijaya, isango le-Ko Samui, Ko Pha Ngan, Ko Tao, nase-Khao Sok National Park
UKo Chang - owake waba isiqhingi esinokuthula, manje osathuthuka kakhulu kwezokuvakasha
UKo Lipe - isiqhingi esincane maphakathi neTarutao National Park, esimangazayo ngaphandle kwezihlahla ezinkulu namabhishi
UKo Pha Ngan - indawo ye-Full Moon Party edumile enamamayela osogwini oluthule
UKo Samet - isiqhingi esiseduze nesiqhingi saseBangkok
Ko Samui - ntofontofo, imvelo, nokuzijabulisa kwe-hippie hangout kukhuphukile
U-Ko Tao - owaziwa ngokudonswa kwawo nemvelo, okufinyeleleka kalula esuka eSurang noma eChumphon nge-high catamaran
I-Khao Lak - isango eliya eziqhingini zaseSimilan, hit hit the 2004 tsunami, kodwa iphilile futhi
IPaki Sok National Park - enye yezindawo ezinhle kakhulu zasendle eThailand
I-Khao Yai National Park - thatha isikhathi sasebusuku i-4 × 4 uhambo lokubona inyamazane noma uvakashele izimpophoma ezihehayo
Isifundazwe saseKrabi - indawo ehlala ugu nezindawo ezinamanzi eningizimu, kubandakanya i-Ao Nang, iRai Leh, iKo Phi Phi neKo Lanta.
Phuket - isiqhingi saseParadesi sokuqala saseParadesi, sesithuthukisiwe kakhulu, kepha sisenamabhishi athile amahle
I-Khon Kaen - enhliziyweni ye-Esaan (Isan) eyaziwa ngezindawo zabo zesilika nezedayinaso.
I-Mae Sot - idolobhana elichumayo lemikhawulo yamasiko ahlukahlukene, enamapaki ezwe amaningi azungeze ukuwahlola
I-Mae Sariang - impilo encane yedolobha emngceleni weThai Burmese nge-trecking neSal Kati National Park
Tarutao National Marine Park - Ikhambo eliganukejako i-Tarutao, Ko Lipe, Ko Tarutao, Mo Lae Bay, Ao Son Bay, Ko Kai Tarutao National Marine Park
I-Thailand inezindawo ezishisayo kakhulu, ngakho-ke kuyashisa futhi kunomswakama unyaka wonke ngamazinga okushisa ebangeni le-28-35 ° C, izinga lokuthola usizo litholakala kuphela ezintabeni ezisenyakatho ekude neThailand.
Abantu baseThailand bangabomdabu ikakhulukazi, yize kukhona okuncane okuqakathekileyo kobuzwe baseChina kanye nokuthathwa kwabaseThai-Chinese ezweni lonke, amaSulumane aseningizimu eduze komngcele waseMalawi kanye nezizwe zamagquma njengeKaren neHmong enyakatho yezwe. Le nkolo ebuswa kakhulu (i-95%) ubu-Theravada Buddhism, yize kukhona ababambelela ezinkolweni zamaConfucianism, amaSulumane, ezenkolo kanye nezenkolo.
Isiko laseTlandland Thai lithonywa kakhulu ubuBuddha. Kodwa-ke, ngokungafani namazwe obuBuddha ase-East Asia, amaBuddha aseThailand alandela isikole iTheravada, esisondelene kakhulu neso Indian izimpande futhi kugxila kakhulu emonetism. Amathempeli aseThai abizwa ngokuthi ama-wats, akhazimula ngegolide futhi akhonjwa kalula ngemihlobiso yawo emihle, enemibala emibalabala, ekhanyayo futhi ayindlovukazi egqoke owolintshi isikhathi esifushane, imvamisa isikhathi semvula esinezinyanga ezintathu. Abafana baseThai nabesilisa.
I-Thailand inamaholide amaningi, ahlobene kakhulu nobuBuddha kanye nobukhosi. Akekho ozigubhayo zonke, ngaphandle kwamabhange, abonakala evaliwe kakhulu.
Izikhumulo zezindiza eziphambili zamazwe omhlaba eThailand ziseBangkok nasePhuket, futhi zombili zisetshenziswa kahle izindiza ezihamba ngezinyawo. Cishe zonke izindiza ezindiza eziya e-Asia nazo zindizela eBangkok, lokhu kusho ukuthi ziningi izinsizakalo futhi ukuncintisana ezindleleni kusiza ukugcina amanani entengo ehla.
Ukuqasha imoto ukuze uyihlole ngokwakho kuyindlela ebiza kakhulu yokuphuma ethaveni eshaywayo, futhi kugwema ukungqubuzana okuqhubekayo kokuqubha ngamatekisi endawo noma abashayeli be-tuk-tuk.
Ukushayela imoto yakho eThailand akuyona eyabantu abanenhliziyo ebuthakathaka, futhi izinkampani eziningi eziqashisayo zinganikeza abashayeli ngenani elifanelekile.
Iningi lezinkampani zikazwelonke zingatholakala eThailand kanye nezinkampani ezithile ezidumile zokuqasha izimoto, ezivame ukushibhile kancane. Izimoto zingaqashwa ngaphandle kobunzima ezindaweni eziningi. Kungakuhle ukukhokha okuncane kakhulu kunesilinganiso esiphansi ngokuphelele sokusebenzisa enye yamazwe asefrance (isib. I-Avis, iBhajethi, kanye neHertz) ukunciphisa ubungozi be-hassles, nokuqinisekisa ukuthi noma yimuphi umshuwalense ofakiwe empeleni ufanele okuthile.
Ithempeli laseThai laziwa njenge-wat. Imvamisa ithempeli alihlali esakhiweni esisodwa, kepha liqoqo lemakhiwo, amathempeli kanye nezigodlo eziboshwe udonga. Kunezinkulungwane zamathempeli eThailand, futhi cishe wonke amadolobhana noma amadolobhana okungenani. Igama elithi “wat” ngokwezwi nezwi lisho isikole, futhi ithempeli bekuyindawo kuphela lapho imfundo ehlelekile yenziwa khona amakhulu eminyaka. Iwashi elijwayelekile likaBuddha liqukethe lezi zakhiwo ezilandelayo:
I-Bot - igumbi lomkhuleko eliyingcwele, imvamisa livulekele izindela kuphela. Ifana nobuciko bokwakhiwa kwe-viharn, kepha imvamisa ihlotshiswe kakhulu futhi inezisekelo eziyisishiyagalombili zokugwema ububi. Yaziwa nangokuthi “ihholo lokugcotshwa” njengoba kulapho izindela zithatha khona izifungo zazo.
IViharn - igumbi elixakeke kakhulu ewatini, kulapho isithombe esikhulu sethempeli likaBuddha kulapho abantu beza ukuzokwenza iminikelo. Kuvulekele wonke umuntu.
I-Chedi noma isitofu - Isakhiwo esenziwe bell ende emise imidwebo kaBuddha.
I-Prang - isiponji esifana neminwe kaKhmer kanye nomsuka we-Ayutthayan okhonza injongo efanayo yenkolo njenge-chedi.
UMondop - isakhiwo esivulekile, esiyisikwele esinamakhonkolo amane nophahla lwe-pyramidal. Imvamisa isetshenziselwa ukukhulekela imibhalo yenkolo noma izinto.
I-Sala - i-pavilion enamacala avulekile esetshenziselwa ukuphumula nanjengendawo yokuhlangana (futhi evame ukusetshenziswa njengendawo yokukhosela imvula).
UChofah - Ukuhlobisa okufana nezinyoni ekugcineni kophahla lwethempeli. Zenzelwe ukumelela iGaruda, isidalwa esiyinganekwane esiyisigamu senyoni, umuntu wesigamu.
Okuhehayo ngokomlando namasiko - amabhishi - iziqhingi - indawo yemvelo eThailand
I-Chiang Mai ukuya eChiang Rai ngezinsuku ze-3 - uhambo lwezinsuku ezintathu ngokusebenzisa iNyakatho Thailand engatholakali
Izinsuku ezinhlanu eGolden Triangle - uhambo lwezinsuku ezinhlanu lwesifunda seGolden Triangle ngokusebenzisa iThailand, iLaos neMyanmar
I-Mae Hong Son Loop - indlela ethandwayo enqamula phakathi kwezintaba ze-Mae Hong Son
Ngolunye usuku eBangkok - uma unosuku nje olulodwa lokusindisa futhi ufuna ukubamba imizwa yedolobha
Ngempelasonto eyodwa eBangkok - okuhehayo okuvulwa kuphela ngezimpelasonto
I-Rattanakosin Tour - uhambo olusheshayo eduze kwesifunda esidumile saseBangkok
I-Yaowarat ne-Phahurat Tour - uhambo lokuhamba usuku lonke ngalesi sifundazwe esinamasiko amaningi
Ukuhlanza - ngaphandle - igalufa - isibhakela eThailand
Ulimi olusemthethweni lwaseThailand luyisiThai.
Njengoba iThailand ingakaze ikhethwe amakoloni, akubaningi abakwaThais abangakwazi ukukhuluma isiNgisi, kepha kusukela ama-1980s amaningi amaThais aqale ukufunda isiNgisi. Ngokuya kwe-2011, isiNgisi siyimpoqo ezikoleni eziningi, futhi kukhulunywa emadolobheni amakhulu, yize ezindaweni zasemakhaya kukhulunywa isiThai esincane. Ngaphandle kweBangkok, abafundi bafunda isiNgisi kusukela eminyakeni engu-13 futhi bafunda ezingeni eliyisisekelo, bambalwa kakhulu abantu abakwazi ukukhuluma isiNgisi.
Ama-ATM atholakala kuwo wonke amadolobha namadolobhana amakhulu, kanti ukuhoxa kwamanye amazwe akuyona inkinga. Lapho usebenzisa ikhadi lesikweletu, i-ATM ngokuvamile izokunikeza inani elingcono kakhulu lokushintshanisa kunekhawunta yokushintshana ngemali, futhi lokhu kunjalo ikakhulukazi uma unekhadi elingakhokhisi imali yokuthenga ngokuhoxiswa phesheya (iyavama emazweni anjenge Australia). Kusukela ekuqaleni kwe-2009, kukhona inani eliphansi le-150 baht lokusetshenziswa kwamakhadi we-ATM angaphandle kuwo wonke amabhange. I-Ay Ayhhya (Krungsri) yama-ATM kufanele igwenywe. Abagcini nje ngokukhokhisa ukwanda kwe-150 THB, izinga lokushintshaniswa lingampofu.
Amakhadi wesikweletu amukelwa kabanzi embonini yabavakashi, ezindaweni zokudlela ezinkulu eziqondiswe kubavakashi, ezitolo ezinkulu nasezitolo zokudla, nasezitolo ezinakekela izivakashi, kepha izitolo eziningi zasendaweni azizemukeli.
Yini ongayithenga eThailand
Ukuphuza ini eThailand
Kufanele wazi eThailand
Amakhekhe e-Intanethi adlangile futhi amaningi abiza kakhulu. Amanani aphansi futhi ijubane lokuxhunyelwa ngokuvamile linengqondo kodwa amakhofi amaningi asondele phakathi kwamabili. Uma uhlela ukuya ku-inthanethi isikhathi esifushane kufanele uqale ubuze ukuthi ngabe kukhona imali encane yini.
Idolobha lomlando le-Ayutthaya
Idolobha elingumlando laseSukhothai kanye namadolobha ahlanganisiwe omlando
Isiza Sokuvubukula kwe-Chiang